Weriye la shaqeeya Ciidamada Dowladda oo ku dhintay Qaraxii Alshabab ku qaadeen Awdheegle. -News and information about Somalia
Home News Weriye la shaqeeya Ciidamada Dowladda oo ku dhintay Qaraxii Alshabab ku qaadeen...
Weriye la shaqeeya Ciidamada Dowladda oo ku dhintay Qaraxii Alshabab ku qaadeen Awdheegle.
Sida Warkii Online ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan milatariga Somalia waxaa weerar ismiidaamin ah saakay lagu qaaday saldhig ciidamada Kumaandooska Somalia ku leeyihiin degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha hoose.
Dhinaca kalana warar hor dhac ah ayaa sheegay in qaraxa ismiidaaminta ah uu ku geeriyooday Gacal Cabdulle oo ahaa filim qaade ka tirsanaa Idacada ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Qaar ka mid ah weriyaasha warbaahita Codka ciidamada oo aan la hadalnay ayaa xaqiijiyay geerida allaha u naxariistee Gacal Cabdulle oo muuqaalada gaarka ah iyo sawirada u qaadi jiray warbaahintaas.
Previous articleDEG DEG:- Qarax Goor Dhow Ka Dhacay Degmada Awdheegle Iyo Rasaas La Maqlayo
Next articleAWDHEEGLE: Al-shabaab oo sheegatay inay Askar badan ku laayeen Qaraxyo Is-miidaamin ah & Wararkii ugu dambeeyay
DF oo looga digay iney ka hortimaado natiijada shirka Habargidir ee...
India’s revocation of Kashmir’s special status will jeopardize regional …